पल प्रकरणः पीडित भनिएकी गायिकाले बयान फेरिन्, अब के होला ? - Nepalese Times
पल प्रकरणः पीडित भनिएकी गायिकाले बयान फेरिन्, अब के होला ?
Nepalese Times April 17, 2022 (1 Month ago) 332 Views
काठमाडौं । अभिनेता पल शाहविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाले अदालतमा बयान फेरेकी छन् ।
नाबालिग गायिका होस्टाइल बनेसँगै मुद्दामा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । उनको बकपत्रले पल शाह पक्षमा खुसीयाली छाएको छ । जाहेरीकर्ताका बुवाको भने बकपत्र लिन बाँकी छ ।
उनको पक्षबाट गएका एक वकिलले भने– ‘होस्टाइल भइन्, बयान पूरै रेडिमेट दिइरहेकी छन् । आफूलाई पलले करणी नगरेको भन्दैछिन् । प्रहरीमा दिएको बयान पनि होइन भन्दै जे लेखेर दिए त्यहि सारेकी हुँ भनिन् । जबकी उनले प्रहरी समक्ष आफूलाई पलले पोखरा, तनहुँ र गैंडाकोटमा गरेर तीनपटक करणी गरेको बताएकी थिइन् । एकाएक अहिले सबै उक्साहटमा हो भन्दैछिन् ।’
यसबीचमा पलको परिवारले गायिकाको परिवारलाई प्रभावमा लिएर बयान फेर्न प्रेरित गरेको आशंका गरिएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४४ को २ (क) मा झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई अदालतले तीन महीनासम्म कैद वा रू ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
त्यही दफाको २ (ख) मा व्यक्तिगत रिसइबीले वा कुनै प्रलोभनमा परी उजुरी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाइ पाउने व्यक्तिलाई उजुरीकर्ताबाट अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने व्यवस्था छ।
तनहुँ अदालतबाट भएको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरिसकेका छन्। उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यससम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन झिकाइसकेको छ।